4 Siyaabood oo Codsiyada Xogta Weyn ay u Bixiyaan Natiijooyin | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 14, 2016 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Sida ku cad xogtan xogtan SingleGrain, shirkaduhu hada waxay aruurinayaan in kabadan 75,000 oo dhibcaha xogta shaqsi keli ah. Taasi waa xog badan… laakiin ma laga faa'iideysanayaa?
Xog weyn waa erey cusub loo isticmaali jiray in lagu sharaxo koritaanka iyo helitaanka xog uruurin ballaaran oo, markii si habboon loo falanqeeyo, gacan ka geysan karta in la gaaro go'aanno ganacsi oo wanaagsan, sida hagaajinta xiriirka macaamiisha, soo saaridda alaabooyin cusub, iyo kobcinta guud ahaan kobaca ganacsiga.
SingleGrain waxay bixisaa 4 Ways taas Analytics waxay kaa caawinaysaa macno u yeelashada xogta weyn:
Qeexitaan - sharraxaad ama sharraxaadda waxa dhacaya.
cudurka - sharaxaada ama sharaxaya sababta wax uun u dhacayaan.
Saadaalin - sharaxaada ama sharaxaya natiijada suuragalka ah.
Diiwaan Gelinta - sharxida ama sharaxaada sida wax loo sameeyo.
Infographic wuxuu ku dhex socdaa shey kasta oo ka mid ah sida suuqleyda iyo shirkadaha ay u adeegsanayaan xog weyn si loo wanaajiyo khibrada macaamiisha, loo hagaajiyo natiijooyinka ganacsiga, loona suuq geeyo macaamiisha cusub.
Tags: xog weynsharraxeyncudurkasaadaalindaawo qorin
Cabashada # 1 ee Ku Saabsan Suuq Geynta